आज बार्सा र वार्यन भिड्दै : स्पेनी क्लब बाहिरहँदा बार्सिलोना के होला ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more आज बार्सा र वार्यन भिड्दै : स्पेनी क्लब बाहिरहँदा बार्सिलोना के होला ?
साउन ३० गते, २०७७ - १७:४७
काठमाडौं । च्यम्पियन्स लिगमा आज राति १२ ः ४५ बजे स्पेनी महारथी बार्सिलोना र बार्यन म्युनिख भिड्न लागिरहेका छन् ।
अन्तिम ४ का लागी यसअघि भएका भिडन्तहरुमा स्पेनकै चर्चित क्लबहरु रियल म्याड्रिड र एथलेटिको म्यड्रिड बाहिरिइसकेका छन् ।
रियल म्याड्रिड अन्तिम १६ बाटै बाहिरिएको थियो भने एथलेटिको म्यड्रिड गएराति एउटा नयाँ क्लब लाइपजिगसँग २–१ ले पराजित भएको थियो ।
लाईपजिग आजभन्दा ११ वर्षअघिबाट मात्रै फुटबल साम्राज्यमा पाइला चालेका क्लब हो ।
च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम ४ मा उसको यो पहिलो पाइलो हो ।
बुण्डेसलिगा च्याम्पियन्स बार्यनसँग भिड्दै गरेको बार्सिलोनालाई सजिलो नभएको फुटबल विश्लेषकहरुले बताएका छन् ।
एकातिर बार्सिलोनाले यो सिजन लालिगामा कमजोर प्रदर्शन गरेको छ भने वार्यन बुण्डेस लिगाको लिग लिडर भएको क्लब हो ।
स्पेनी क्लब च्याम्यिन्सलिगबाट भटाभट बाहिरिइरहेको बेलामा कतै बार्सा पनि बाहिरिने त होइन भन्ने आशंकाले उसका फ्यानहरुमा डेरा जमाएको छ । तर खेललाई जुनसुकै अवस्थामा पनि आफु अनुकुल फर्काउन सक्ने खुवीका स्टार खेलाडी लियोनल मेसीको साथले बार्सा मैदानमा उत्रिने छ ।
साउन ३० गते, २०७७ - १७:४७ मा प्रकाशित